Kooxda Real Madrid oo heshiis cusub ku abaal-marinaysa kabtankeeda Sergio Ramos – Gool FM
(Madrid) 22 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa heshiiska u kordhinaysa kabtankeeda Sergio Ramos, iyadoo ka saxiixanaysa heshiis cusub oo hal sano ah sida wararku ay sheegayaan.
Difaacan dhexe ayaa door fiican u ciyaaray xilli ciyaareedkan kooxdiisa Los Blancos, isagoo u saftay 35 kulan tartammada oo dhan una dhaliyey 10 gool.
Ramos oo 31-sano jir ah ayaa ka caawiyey kooxdiisa inay u tartanto hanashada horyaalka La Liga, si la mid ah isagoo gacan sare ku lahaa inay soo gaaraan afar dhammaadka Champions League.
Sida ay warinayso jariiradda Marca, agaasimeyaasha kooxda Real Madrid ayaa raba inay aqoonsadaan muhiimadda uu xiddigani kooxda u leeyahay, waxaana ay doonayaa in heshiiskiisa ay ku kordhiyaan sanad dheeraad oo ah oo uu ku sii joogayo garoonka Bernabeu, kaasoo kooxda ku sii hayn doona ilaa bisha June sanadka 2021-ka.
Ramos ayaa heshiiskiisa haatan waxaa laga saxiixay sanadkii 2015-kii, kaddib markii si xoog leh la iskula dhexmaray wararka sheegaya suuragalnimada inuu ciyaaryahankani u dhaqaaqi doono kooxda Manchester United, iyadoo heshiiska uu haatan kula jiro kooxda Real Madrid ka dhacayo saddex sano kaddib.